Antontam-baovaon’ny angovo (SIE): fitaovana hampahomby ny fitantanana | NewsMada
Antontam-baovaon’ny angovo (SIE): fitaovana hampahomby ny fitantanana
Nampahafantarina, omaly, ny fehin-kevitra mirakitra ny Antontam-baovao mikasika ny angovo (SIE) eto Madagasikara. Ilaina amin’ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra rehetra mikasika ny tontolon’ny angovo amin’ny antsipiriany eto amintsika izy ity, miainga any amin’ny famokarana herinaratra amin’ny endriny samihafa, miafara hatrany amin’ny mpanjifa.
Nambaran’ny minisitry ny Angovo sy ny akoranafo (MEH), Rasoloelison Lantoniaina fa ahafahana mamaly ny fanamby amin’ny lafiny sosialy, toekarena ary tontolo iainana ireo antontam-baovao mifanaraka amin’ny paikady mandrindra ny angovo.
Dingana voalohany hampiasana ny SIE ity vita ity. Hita ao anatiny koa ny singa samihafa toy ny famantarana ny angovo, ny fanadihadihana amin’ny fikarohana, ny antontam-baovao manodidina ny otrikarena azo trandrahina ho an’ny angovo, ny teknolojia hampiasaina, ny vokatra mety ho azo, sns. Eo koa ny didy aman-dalàna mifehy ny angovo rehetra. Voafaritra ao koa ny saritany ahitana ny faritra sy ny toerana manana otrikarena azo ahodina ho angovo eto Madagasikara. Niara-namolavola ny SIE ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny ala, ny ao amin’ny Tetibola sy ny sampandraharahan’ny ladoany, ny Angovo sy ny akoranafo, ny Instat, ny sampandraharaha rehetra voakasika ao amin’ny minisiteran’ny Angovo sy ny akoranafo (Jirama, Ader, OMH, ORE).